TRANOBEN’NY SERASERA SY NY KOLONTSAINA 5: Nisitraka “Kits de visioconference” avy amin’ny Unesco – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:30
Noraisin'ny Minisitra omaly ireo fanomezana.
Accueil/Samihafa/TRANOBEN’NY SERASERA SY NY KOLONTSAINA 5: Nisitraka “Kits de visioconference” avy amin’ny Unesco
Notanterahina omaly tetsy amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy ny lanonana fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ny fitaovana informatika “Kits de Visioconference” avy amin’ny Unesco, izay hapetraka any amin’ireo Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina efa mijoro ankehitriny, isan’izany Antsiranana, Toamasina, Fianarantsoa, Toliara, ary Mahajanga.
Lucien R. 25 août 2021
Ankoatra ny fampiroboroboana ny lafiny Kolontsaina, anisan’ny antony lehibe nametrahana ireo Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina nanerana ny Nosy ny fampivoarana ihany koa ny sehatry ny serasera, indrindra ny asa fanaovan-gazety. Any amin’ireo Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina rehetra ireo rahateo, dia misy efitrano manokana ho an’ny mpanao gazety, efitrano amin’ny resaka informatika sy ny sisa. Mila fitaovana arifomba anefa miaraka amin’izany, mba hahafahan’ny mpisehatra tsirairay mahatanteraka ny asa amin’ny antsakany sy andavany. “Tanjon’ny Minisitra ny ampitovy lenta ny mpanao gazety rehetra manerana an’i Madagasikara, ka tafiditra ao anatin’ny fanatrarana izany tanjona izany no anton’izao fampitaovana ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina manerana ny Nosy izao, izay hisaorana be dia be ny Unesco tamin’ny fanomezana izany”, hoy ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo.
Hitohy ny fiarahamiasan’ny roa tonta
“Kits de visioconférence” no natolotra. Fitaovana izay tsy hahafahana manatanteraka fivoriana ampitaindavitra fotsiny ihany fa hahafahan’ny mpanao gazety ihany koa manatanteraka fiofanana isan-karazany. Nandritra ny lahateniny, nambaran-dRamatoa Minisitra fa isan’ireo sehatra, izay tsy manana fotodrafitrasa isa-paritra mifandraika amin’ny filàna ny sehatry ny serasera sy ny kolontsaina. Izany indrindra no antony voalohany nametrahana sy nananganana ireo Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina manerana ny nosy, izay 5 hatreto no efa notokonana tamin’ny fomba ofisialy ary 9 kosa no andalam-pahavitana amin’izao fotoana izao. Ao anatin’ireny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina ireny dia misy toerana manokana ho an’ny mpanao gazety, misy ny salle informatique, misy salle de conférence, misy ny « rayon » manokana ho an’ny mpanao gazety ihany koa ao amin’ny tranomboky, misy birao ho an’ireo ho mpikambana vaovao anatin’ny biraon’ny Olafitry ny mpanao gazety.
Tetsy ankilany, nilaza ny teo anivon’ny Unesco, tamin’ny alalan’ny mpandrindra nasionaliny, fa vonona hatrany ny hanamafy ny fiaraha-miasa amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina. Nankasitraka sahady ny mety ho tohin’izay fiaraha-miasa izay ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo.
FANATSARANA NY SEHA-PIHARIANA RONONO: Tonga ireo ombivavy be ronono miisa 165 nafaran’ny Fanjakana
TETI-DRATSY HAMONOANA NY FILOHA RAJOELINA: 10 tapitrisa Euro no nangonin’ireo olon-dratsy, Orinasa mpitrandraka solika no mpiray tendro
Distrikan’i Mandritsara : Maty voatifitra ilay dahalo raindahiny nokarohina fatratra
TETIBOLAM-PANJAKANA 2021: Niverina tamin’ny endriny nandanian’ny Depiote azy